Maninona ny marketing B2B anao no mila rafitra fampitandremana mialoha | Martech Zone
Hoy ilay fitenenana mandry ianao, resy mihatra mivantana amin'ny marketing, saingy indrisy tsy maro ny mpivarotra no mahatsapa izany. Matetika loatra izy ireo dia miandry ny minitra farany hahalalany ny vinavinan'ireo mpanjifa sarobidy eo am-piandohana ary ireo fahatarana ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny faran'ny fikambanana. Ny mpivarotra B2B rehetra dia mila an rafitra fampitandremana mialoha izay manampy hivadika vokatra.
Kely loatra tara loatra
Ireo mpivarotra maoderina dia mazàna mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fifanarahana nahazo fandresena na amin'ny alàlan'ny proxy akaiky, toa Fomba fitarihana mendrika (SQLs). Ny olana amin'ity dia 4-fold. Hanombohana, izany tsy miraharaha sy tsy dia manao tatitra loatra ireo mpampiasa miasa izay tsy te hiresaka amin'ny Sales fotsiny. Ireto no vinavinan'izy ireo izay aleony manompo tena ny mombamomba azy fa tsy miantso azy ireo amin'ny solo-barotra. Noho ny haren'ny fampahalalana amin'ny Internet, mirongatra ny isan'ny fanantenana manompo tena. Hitan'i Google izany ny mpividy orinasa dia tsy mifandray amin'ny mpamatsy mivantana raha tsy vita ny 57 isan-jaton'ny fizotran'ny fividianana. Tsy azo odian-tsy jerena ireo mpanjifa ireo. Ny fampidirana mpizara irery amin'ny famakafakana ny fampielezan-kevitrao dia hanome sary marina kokoa ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra.
Faharoa, ny mijery fitarihana any aoriana ao amin'ny tsingerin'ny varotra dia mahatonga ny varotra hijery ny fitsarana sy ny fitondran-tenan'ny mpivarotra. Ny repoblika tsirairay dia mety tsy te-hanova fitarihana raha tsy azony antoka fa vinavinan'asa mafana izany, satria ny paikadin'izy ireo dia ny mifantoha amin'ny fifampiraharahana tsara indrindra ary tazomy ny tahan'ny fiovam-pon'izy ireo. Ny repoblika hafa dia mety hanao ny mifanohitra amin'izany ary mamadika fitarihana mora loatra, na manao izany marobe izy ireo, aorian'ny fifanatrehan'ny marketing. Ny fiovam-po be loatra dia mety hanitatra ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra, izay misy fiatraikany amin'ny famatsiam-bola ataon'ny marketing amin'ny ho avy.
Amin'ireo tranga roa ireo, ny marketing dia mifarana amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny varotra. Miasa mafy ny marketing mba hiteraka fitarihana, tsy raharahiana izy ireo amin'ny faran'ny telovolana satria mifantoka amin'ny famaranana ny fifampiraharahana ny varotra ary lany andro ny fitarihana. Ity dia teboka mikatona malaza amin'ny fifandraisana marketing-sales.
Ny olana fahatelo amin'ny fandrefesana ny fahombiazana amin'ity dia ity ny varotra dia miharihary amin'ireo lesoka mety hitranga amina dingana maromaro, ao anatin'izany ny fitadiavana firaka, ny anjaran'ny repte varotra, fandefasan-kafatra sns ... Ohatra, ndao atao hoe manao marketing be ny marketing izay miteraka fifamatorana mafy amin'ny fitsarana maimaimpoana. Raha tsy mahavita asa tsara ny rep development development (SDR) (izany hoe miandry ela loatra, mandefa mailaka misy lesoka amin'ny tsipelina, na tsy mahalala fomba amin'ny telefaona, sns.), Na tsy manana fahitana hahita ny valin'ny tsara azo avy amin'ny ny fitsarana, avy eo mety hiafara amin'ny fanafoanana, na eo aza ny fahombiazana matanjaka.
Raha maro ny SQL mitarika amin'ny fihenan'ny tahan'ny fiovam-po, ny mpivarotra dia mila mampifantoka ny ezaka ataon'izy ireo ambany ao amin'ny fantsona mba hanakatonana fifanarahana bebe kokoa. Ary farany, ny fomba fanaovana scoring firaketana dia matetika mitsara, miaraka amin'ireo teboka voatondro ho an'ny prospect fipihana mailaka, fisintomana ary fitsidihana pejy web. Raha tokony ho fomba fiasa siantifika dia mazàna raharaha farany maminavina ny fanaovana scoring.
Ny fomba tsara indrindra dia ny famelana ny fitondran-tenan'ny vinavinanao ho rafitra fampitandremana mialoha holazaina aminao raha eo amin'ny làlana mankany amin'ny fahombiazana ny fampielezan-kevitrao. Izy io dia azo refesina amin'ny alàlan'ny fanandramana maimaimpoana na mpanjifa freemium izay tena mampiasa ny vokatrao. Mazava ho azy, mbola te handrefy na hivadika SQL izy ireo na handoa mpanjifa, fa ny fijerena an'ity metric ity dia mampiseho hoe firy isan-jaton'ny vinavina no tena mirotsaka amin'ny vokatrao ary iza no tsy. Zava-dehibe izany, satria ny mpivarotra dia mila mahafantatra avy hatrany raha misy fampielezan-kevitra mitondra karazan'olona mety. Amin'izany no ahafahan'izy ireo mampiato sy mamerina manitsy ny fanentanana tsy mahomby alohan'ny tara loatra.
Mba hahazoana an'ity karazana fahitana ity dia mila ampiasanao ny vokatrao handraketana ny fihetsiky ny mpanjifa ary avy eo afatory amin'ny fampielezan-kevitra niavian'izy ireo. Preact mamorona an'io fahitana io amin'ny alàlan'ny fanangonana an'ity data ity, ary mampifandray azy amin'ny Salesforce na ny rafitra automatisation marketing toa ny Marketo sy Hubspot, ka afaka mandray andraikitra mora foana ny mpivarotra. Midika izany fa tsy miandry intsony raha tsy tara loatra vao miditra.
Fikojakojana ny mpanjifa dia ampahany manan-danja amin'ny orinasa rehetra, saingy maro amin'ireo fomba mitovy amin'izany no azo ampiasaina mba hahazoana antoka fa manana ny traikefa tsara indrindra amin'ny vokatrao ihany koa ny prospect. Ny fomba fihenanay ny fampihenana ny mpanjifa dia fomba mahery vaika ihany koa handrefesana mialoha mandritra ny fivarotana raha mahomby ny fampielezan-kevitra. Izany dia manome ny mpivarotra fahitana bebe kokoa amin'ny ROI amin'ny ezak'izy ireo, ary manome hery azy ireo ho mavitrika.
Amin'ny sehatra hafa, ny rafitra fampitandremana mialoha dia ampiasaina mba hisorohana ny loza. Tratran'izy ireo ny aretina alohan'ny fanaparitahana azy, mampitandrina ny olona amin'ny rivodoza efa ho avy izy ireo, na mahita hosoka alohan'ny hanimbana fahasimbana lehibe. Na izany aza, ny rafitra fampitandremana mialoha dia azo ampiasaina ihany koa mba hahazoana tombony amin'ny fifaninanana sy hanomezana ROI tena izy. Ireo mpivarotra B2B dia tsy mila miankina amin'ny intuition intsony na miandry mandra-pahatapitry ny fotoana mety. Ny data sy ny fahitana ny fihetsiky ny mpanjifa dia manome lanja ny mpivarotra ho mavitrika kokoa ary tsy hivily lalana.
Tags: b2bb2b marketingfifampiraharahanafampitandremana mialoharafitra fampitandremana mialohamiteraka fitarihanamitoryvarotra mitarika mahaymitarika barafampitandremana
Tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa rehetra, fanampiana, serivisy ary fiaraha-miasa amin'ny Preact. Preact dia serivisy fahombiazan'ny mpanjifa mifototra amin'ny rahona izay manampy ny orinasan-tsoratry ny famandrihana hampitombo ny sanda amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny churn, ny fahazoana mpanjifa vaovao karama, ary ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny mpampiasa. Ny maodely mialoha ny fampiasana sy ny fomba fitondran-tena amin'ny alàlan'ny fanadihadiana amin'ny angon-drakitra lehibe, ny siansa momba ny fitondran-tena ary ny fianarana milina.